Reproductive Ókè mmiri ọgwụ, Progesterone ịgba ntụtụ, Altrenogest Oral Ngwọta - Nke abụọ Ókè mmiri ọgwụ
Manual maka vitamin AD injection [Description] Ngwaahịa a bụ a colorless ma ọ bụ ìhè edo edo anya mmanu mmanu mmiri mmiri. [Function na Jiri] Ngwaahịa a nwere vitamin A na D. na vitamin A nwere ike na-arụ ọrụ dị ka ndimenede uto nke anima
Mmiri ọgwụ ọgwụ. Ngwaahịa a nwere ike kwalite azụ hypophysis nyak GTH; welie nwanyi azu follicle na secrete estrogen nke ga-enyere mee ngwangwa follicle okè, ovulation na mmepụta nke corpus luteum; akpali spam mmepụta na okè maka nwoke azụ. Ọ bụ a elu-oru oma azụ odinagogue, huu mma nrụpụta karịsịa maka ugwu ugwu
Nzube anyị na-a na-eduga si ọtụtụ mba ụlọ ọrụ na-nwere ihe kasị mma àgwà anyị ubi.
Anyị ga-ụwa kasị elu nkà na ụzụ na ọkachamara elites ike kasị mma na kasị mma ọrụ, na-na-enweta aha na ahịa òkè ezi ịtụkwasị obi na iguzosi ike n'ezi nakwa dị ka anụ mma.
Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ Factory guzobere 1988. Anyị na-e-agba mbọ ka anụ ozuzu ụlọ ọrụ ruo afọ 30, na anyị ikpokọta akụrụngwa, nnyocha na mmepe, rụpụta, ule, ahịa, na ahịa nkwado ọnụ na-a ukwuu enterprise. Anyị ụlọ ọrụ e ọdịda dị ka "Zhejiang High-tech ụlọ ọrụ" na Cixi Top 20 ụlọ ọrụ "...
Kpọtụrụ anyị n'ihi na ihe ọmụma ma ọ bụ akwụkwọ na otu oge atọrọ